Akhriso: magacyada horjoogayaashii la khaarijiyay+sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Ali Abdulkadir Ali / August 14, 2020 August 14, 2020
Sh.Hoose(SONNA) Ciidanka Kumaandooska Danab ee Xoogga dalka ayaa maanta la wareegay degmadda Kuntuwaareey ee gobolka Sh.hoose, halkaasi oo aheyd xaruntii ugu Weynaa ee maleeshiyada Alshabaab ee gobolka Sh.hoose.
Dagaal kooban oo ka dhacay halkaasi ayaa waxaa lagu dilay Horjoogeyaal iyo Maleeshiyaad katirsan Argagixisada, iyaddoo qaar kale nolosha lagu qabtay.
Ciidanka Danab ayaa Xabsi ku yaalla Degmadda Kuntuwaareey kasii daayey dad Shacab ah oo Kooxda Alshabaab u xirnaa, waxaana sidoo kale ay soo badbaadiyeey Caruur ay Nabad diidka u tababarayeen Is-qarxinta iyo Dagaalada.
Xiliga ciidanka kumaandooska gudaha ay ugalayeen kuntuwaareey waxaa uu shir uga socday qaarkamid ah horjoogayaasha al-shbaab kuwaasi oo qaarkood ladilay qaarna ladhaawacay qaarna nolosha lagu qabtay halka kuwa kalana ay si dirqi ah kubaxsadeen.
Horjoogeyaasha lagu dilay Howlgalkaan ayaa kala ah:-
1- Madaxa Jugta Culus ee Gobalka Sh.Hoose Maxamuud Axmed Gaboobe Raage (Daariq)
2- Madaxa Maaliyadda Kuntuwaareey Qaalid Cumar Sariix.
3- Madaxa Maxkamadda Kuntuwaareey iyo degaanada hoos yimaada Muxsin Shiikh Cali.
4- Madaxa Jabhadda ka howlgasha Kuntuwaareey (Saalaxudiin)
Taliyaha Guutada 16aad ee Kumaandooska Danab Gle Ismaaciil Cabdi maalik maalin ayaa sheegay in Ciidamada ay howlgalo ka wadaan Xaafadaha ay ka kooban tahay degmadda Kuntuwaarey, iyaggoo ku raad jooga baxsadka maleeshiyaadka Alshabaab ee laga itaalka roonaaday.
Degmadda Kuntuwaarey ayaa waxa ay aheyd Goobta kaliya ee xoogga Shabaabka ku haray, waxayna sidoo kale Ciidanka Danab kaabiga ku hayaan Sablaalle oo ay gaareen firxadka maleeshiyadii isaga Carartay Kuntuwaarey.
Waxaa sidoo kale u suura gashay Ciidamada in ay bur buriyaan Bambooyin Argagixisada ay u diyaariyeen dhagridda dadka & Dalka.
Howlgalkaan ayaa qeyb ka ah Qorshaha Ciribtirka Argagixisada Alshabaab ee Xidida siibka uu ku socdo, iyaddoo Alshabaab lagala wareegay furaha dagaalka.